तपाईँ वा तपाईँको आफन्तलाई परदेशमा समस्या परेको छ ? यी नम्बरमा फोन गर्नुहोस्
काठमाण्डौ – तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ रु या तपाईँको कोही आफन्त विदेशमा काम गर्न जानु भएको छ ? वा विदेशबाट काम गरेर भर्खरै फर्किनु भएको छ ? यो महामारीका बेला तपाईँ या तपाईँका आफन्तलाई केही अप्ठेरो पो परेको छ कि ? तपाईँ आफूलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न र जिज्ञासा तपाईँको जिल्लामा रहेका आप्रवासी श्रोत केन्द्रहरुमा राख्न सक्नुहुन्छ ।
नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको दुईपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना अन्तर्गत स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा अहिले विभिन्न जिल्लामा श्रमिकको समस्या सुन्न, सही सूचना दिन र समाधानका लागि समन्वय गर्न आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरु सञ्चालित छन् ।